Mwube / Ngwuputa - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Nyocha / GIS>
Mwube / Ngwuputa>
Tourism / Ancient ụlọ nchedo>
Ndị agha / ndị uwe ojii>
Gịnị bụ Smart City
Ezigbo ngwa nke Smart City
Igwefoto oblique Rainpoo na enyere aka na oru Smart City
Gịnị bụ oblique ese foto eji na-ewu / Ngwuputa
Site na ngwanrọ nke eserese 3D, ọ nwere ike ịlele anya, ogologo, mpaghara, olu na data ndị ọzọ na ụdị 3D .. Usoro a dị oke ọnụ ma dịkwa ọnụ ala nke mmụba olu dị oke mkpa bara uru iji gbakọọ ebuka na mines na okwute maka ngwa ahịa ma ọ bụ nlekota nyocha.
Nlekota oru na oru nhazi
Site na usoro 3D ziri ezi nke eserese eserese mepụtara, ndị na-ewu ụlọ / ndị na-elekọta m nwere ike ịhazi ma jikwaa arụmọrụ saịtị yana ịrụ ọrụ n'etiti otu. Nke a bụ n'ihi na ha nwere ike inyocha akwụkwọ nke ihe ewepụtara ma ọ bụ kwaga ya dabere na atụmatụ ma ọ bụ ụkpụrụ iwu.
Ntụle tupu na mgbe mkpọpu ala ma ọ bụ ọgbụgba ọkụ
Site na iji igwefoto a na-egwupụta egwu, ị na-ewepụta ihe nrụpụta 3D na-akwụ ụgwọ ma dị mfe na ụdị elu maka ebe a ga-agbapụ ma ọ bụ gbụọ. Data a na - enye gị ohere ijikwa akụ dịka ọnụ ọgụgụ nke gwongworo dị mkpa. Ntụnyere megide nyocha e weere tupu na mgbe ọgbụgba ọkụ ahụ ga-ekwe ka a gụọ ọtụtụ mpịakọta karịa. Nke a na-emeziwanye atụmatụ maka mgbawa n'ọdịnihu, na-ebelata ọnụ ahịa nke ihe mgbawa, oge na saịtị na mkpọpu ala.
Kedu ihe kpatara iji drones na igwefoto oblique na-ewu / nsị
Nchekwa maka ndị ọrụ
N'ihi ọdịdị ọrụ nke ọnọdụ owuwu ihe na ebe a na-egwupụta akụ, nchekwa nke ndị ọrụ bụ ihe kacha mkpa. Iji ụdị mkpebi dị elu site na igwefoto oblique, ị nwere ike inyocha ma ọ bụ ụzọ siri ike ịnweta ma ọ bụ okporo ụzọ dị elu nke saịtị ahụ, na-enweghị itinye ndị ọrụ anyị n'ihe egwu.
Modelsdị 3D nke igwefoto oblique wuru wuru ogo ogo nyocha ya na obere oge, obere mmadụ na obere akụrụngwa.
Njikwa na ntinye nke oru a nwere ike mezue na usoro 3D na-enweghị ọrụ na-aga saịtị ahụ iji mejuputa ọrụ ndị a, nke ga-ebelata ụgwọ.
E zigara nnukwu ọrụ na kọmputa ahụ, nke zọpụtara oge dum nke ọrụ ahụ dum